Ifowuni Ubuntu - Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 2)
Ubuntu Chukumisa i-OTA-12 ifika igqibezela inguqu ukuya eLomiri, eyayisaziwa njengeUniity 8
Ubuntu Bamba i-OTA-12 ilapha kwaye inokuqhayisa ngokuba yinguqulelo yokuqala yokwamkela imeko yemizobo ngoku eyaziwa ngokuba yiLomiri.
Ubuntu Bamba i-OTA-12 Ukuza ngoMeyi 6 ngeScreen seKhaya eliPhuculweyo
I-UBports iqhubele phambili ukuba i-OTA-12 ye-Ubuntu Touch izakufika ekuqaleni kuka-Meyi, nge-6, kwaye phakathi kwezinto zayo ezintsha siya kuba nescreen sasekhaya.
IXiaomi's Redmi Qaphela i-7 iyakwazi ukuqhuba Ubuntu bokubulela kubulelwe ngumbhekisi phambili
Umphuhlisi ufumene iRedmi Qaphela yakhe i-7 yokuqhuba Ubuntu bokuthinta, inkqubo yokusebenza kwe-Ubuntu ngoku ephuhliswe zii-UBports.
Ubunye 8 buswelekile; phila lomiri
Lomiri. Le yindlela i-UBports eyithiye ngokutsha indawo yemizobo eye yaphuhliswa okoko i-Canonical yashiya i-Unity 8 kunye nokudibana. Sikuxelela izizathu.
Ubuntu Touch ngoku inokuqhutywa kwiRaspberry Pi 3. Ewe, ukuba sidibanisa ipaneli yokuthinta esemthethweni
I-UBports yabelane ngenqaku apho athetha khona malunga nezicwangciso zexesha elizayo kwaye bongeze inkxaso yokuqhuba Ubuntu kwiRaspberry pi 3.
Ubuntu Touch iyafumaneka kwimifanekiso engama-64 ye-ARM
Ubuntu Touch iyaqhubeka nokuqhubela phambili, njengoko kungqinwa kukusungulwa kwemifanekiso engama-64-bit ye-ARM yenkqubo yokusebenza kwe-Ubuntu.
Ubuntu Bamba i-OTA-11 ekulungele ukuvavanywa, iza nekhibhodi ekrelekrele
I-UBports, ebisebenza nge-Ubuntu Touch okoko i-Canonical iyishiyile, ikhuphe i-OTA-11 kwabo bafuna kwaye banokunceda.
Ubuntu Bamba i-OTA-10 ngoku iyafumaneka. Ezi ziindaba zakho
I-UBports, ethathe inxaxheba kuphuhliso lweFowuni yoBuntu, ikhuphe i-OTI-10 yoBuntu boBuntu. Sikuxelela ezona ndaba zibalaseleyo.
Ubuntu Touch inebug kwi-Done kwaye ii-UBports zisicela uncedo ukujonga ukuba sele bezisombulule
I-UBports iyaqhubeka nokuphucula Ubuntu Buntu, kodwa isicela uncedo ukuze wonke umntu onesixhobo esihambelanayo azame oko akulungiselela.
Ubuntu Touch iyaqhubeka: I-UBports isebenza kwi-OTA-10 yenguqulo yeselfowuni ka-Ubuntu
I-UBports iqinisekisile ukuba iyasebenza kwi-OTA-10 ye-Ubuntu Touch, inkqubo yokusebenza yeselfowuni eyekile kwiCanonical okwexeshana.
Ubuntu Bamba i-OTA-8 ngoku iyafumaneka, ifika inomxholo omnyama
Ubuntu Bamba i-OTA-8 ngoku iyafumaneka. Kule nqaku sikubonisa zonke iindaba eziza nolu hlobo lutsha.
Ubuntu Touch OTA-8 izakufika ngo-Matshi 6
Ii-UBports ziveze ezinye zeendaba abazilungiselele olu phehlelelo lutsha. Phakathi kwazo sinokuqaqambisa ukufudukela ...
Inguqulelo entsha ye-OTA 7 ye-UBports ifika inezinto ezintsha
Iprojekthi ye-UBports, ethathe inxaxheba kuphuhliso lweqonga le-Ubuntu Touch, emva kweCanonical yaba ...
Uhlaziyo lwesithandathu lwe-UBports OTA sele lukhutshiwe
Uluntu lwase-UBports kutshanje lubhengeze ukumiliselwa kohlaziyo lwesithandathu lwe-OTA (Ngaphezulu komoya) yenkqubo yokusebenza ye-Ubuntu Touch
Ubuntu Chukumisa i-OTA-5 ifika ngesikhangeli esitsha kunye nophuculo olungakumbi
Emva kweenyanga ezimbalwa zomsebenzi onzima, i-UBports yabhengeza kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukubakho kwenguqulelo entsha, eyi-Ubuntu Touch OTA-5 ...
I-UBPorts isungula i-OTA-4 yeeFowuni zoBuntu kunye nokufika kweXenial Xerus
Ifowuni Ubuntu yo-OTA-4 iyafumaneka ngoku. Inguqulelo entsha egutyungelwe phantsi kweprojekthi ye-UBPorts ayibalulekanga kuphela kodwa izisa nokuphuculwa okunomdla
Ubuntu Ifowuni iya kuba yinkqubo yokuqala yeLinux ehambelana nokusetyenziswa kwe-Android
Iprojekthi ye-UBPorts ixele ukuba kungekudala bazakusebenza ngokuzisa ii -apps ze-Android kwifowuni ye-Ubuntu, konke kubulelwe iprojekthi ye-AndBox evumela oku
I-UBPorts isungula i-OTA-2 yezixhobo zeFowuni Ubuntu
I-UBPorts iyaqhubeka nokusebenza kwi-Ubuntu Touch nakwizixhobo ezize ne-Ubuntu Phone njengenkqubo yokusebenza. Ngoku sele benayo i-OTA-2 yabo
I-UBPorts okanye indlela ekumele ukuba yayiyeyifowuni ka-Ubuntu
I-UBPorts iyaqhubeka ngefowuni Ubuntu. Ayiphuculi nje uphuhliso kodwa ikwazisa nenkqubo yokusebenza Ubuntu ephucukileyo
I-Nexus 5 sele ihambelana neprojekthi ye-UBPorts kunye nophuhliso lwayo
I-Nexus 5 ekugqibeleni ifumana uhlaziyo lwe-UBPorts. Bawuqinisekisile umsebenzi weprojekthi yeHelium kunye nokufika kwe-OnePlus 5 kunye ne-3 ....
Umqambi weFowuni Ubuntu ochaza ukusilela kwenkqubo yokusebenza
Nangona isibhengezo sokulahla kudala, kusekho ukugxekwa okungathandabuzekiyo kweCanonical kunye noBuntu ngokushiya Ubuntu Ifowuni kunye nokudibana ...
I-UBports ikhupha uBuyekezo lokuQala oluQinisekileyo loBuntu lweeFowuni zoBuntu
Iqela le-UBports ekugqibeleni libhengeze uhlaziyo lokuqala oluzinzileyo lwe-Ubuntu Touch (i-OTA-1) kwii-mobiles ze-Ubuntu kunye neepilisi.
I-UBports ithembisa ukuqhubeka neprojekthi yefowuni Ubuntu
Abaphuhlisi bomntu wesithathu abanjengo-UBports bathembisile ngokuqhubeka nokuphuhlisa iqonga loBuntu lokuHamba ngeeselfowuni kunye neetafile ezinobuntu.
IProjekthi Halium, ithemba kubasebenzisi beFowuni Ubuntu
Iprojekthi ye-Halium yiprojekthi yophuhliso ethi izame ukwenza iqonga lesoftware elinye kuzo zonke izixhobo ...
Iifowuni zoBuntu ziya kuyeka ukufumana uhlaziyo lokhuseleko ngoJuni
Iifowuni ze-Ubuntu kunye neepilisi azisayi kuphinda zifumane uhlaziyo lokhuseleko ukusukela ngoJuni, kwaye iVenkile yoBuntu iya kuvala kude kube sekupheleni kuka-2017.
Ifowuni ka-Ubuntu iya kuba nevenkile entsha kunye neWayland
I-UBPorts iya kuthatha i-Ubuntu Ifowuni. Ke, kungekudala baya kuphehlelela ivenkile entsha yezixhobo zeFowuni Ubuntu kwaye baya kwenza iWayland ...
Ubunye 8 kunye neFowuni Ubuntu sele benabakhuseli abasemthethweni
Akukho ntsuku idlulileyo okoko kwabhengezwa ukurhoxa kwe-Unity 8 kwaye abasebenzisi abaninzi sele bexelile ukuba bazakuqhubeka neeprojekthi zomhlala phantsi ...
Kuza kwenzeka ntoni kwifowuni Ubuntu emva kokubuya kweGnome?
Ubunye 8 buphelile ku-Ubuntu, into eya kuthi yenzeke ngokuDibana. Kodwa ngaba Ubuntu Ifowuni igqityiwe nayo? Ngaba iprojekthi iya kuqhubeka?
Ubuntu Ifowuni iya kubakho kwi-MWC 2017 eBarcelona
I-Canonical iya kuba nokuma kwi-MWC 2017 e-Barcelona. Kuyo, umboniso weFairphone 2 ngeFowuni Ubuntu wabhengezwa kwindawo yokuma ...
Ubuntu Ifowuni ye-OTA-15 ngoku iyafumaneka
Uhlaziyo olutsha lwezixhobo zeProjekthi yoBuntu ngoku luyafumaneka. Olu hlaziyo lwaziwa njenge-OTA-15 kwaye lungisa ezinye iibugs ...
Isikhangeli se-Ubuntu ekugqibeleni siyakutshintsha i icon yayo
Okokugqibela, i-Ubuntu web browser iyakutshintsha i icon kwaye iyayeka ukuba nekhampasi edumileyo kwi icon yayo ukuze ibenelizwe ...
I-OTA-15 ayizukufaka galelo kwinto entsha kodwa iya kubaluleka
I-OTA-15 entsha iza kufika kulo nyaka kwiifowuni eziphathwayo ezinefowuni Ubuntu, kodwa ayizukuba nomsebenzi omtsha kodwa iya kubonelela ngokulungiswa kweebugs kunye neengxaki ...
Iiapps ze-Android zinokuhambelana nefowuni ka-Ubuntu
U-Marius Gripsgård ubhengeze ukuba usebenza kwiprojekthi enxulumene ne-Ubuntu Ifowuni eya kuvumela ukufakwa kwe-Android zokusebenza ku-Ubuntu ...
Mir: inqanaba kunye nokuvela kwe-2016
Ukuphononongwa kweCanonical ukuvela kweMir kwi2016 kunye nemigca yayo yokusebenza kunyaka olandelayo we-2017, ngenjongo yokufikelela ku-Ubuntu 17.04.
Iintetho ze-Canonical, ayizukubakho nayiphi na ifowuni ka-Ubuntu okanye uhlaziyo olukhulu kangangexesha elithile
Abameli be-Canonical bathi akuyi kubakho selfowuni nge-Ubuntu Ifowuni de iiphakheji ze-snap zifikelele kwi-Ubuntu ecosystem ...
I-Nexus 5 kaGoogle sele ingumbulelo oshukumayo ophathwayo kwifowuni Ubuntu
I-Nexus 5 sele inenguqulo epheleleyo ye-Ubuntu Ifowuni enkosi kubafana kwi-UBPorts, into eya kukuvumela ukuba usebenzise iselfowuni njengekhompyuter ...
Zeziphi iindaba eziza kubakho kwifowuni ka-Ubuntu ngexesha lika-2017?
Kusele iiyure ezimbalwa kakhulu ukuqala i-2017 kwaye asazi naziphi na iindaba eziza kuziswa yiFowuni ye-Ubuntu kubasebenzisi bayo nakwiimarike ...
I-OTA-14 entsha ngoku iyafumaneka ngezinto ezininzi ezintsha zeFowuni Ubuntu
I-OTA-14 entsha ye-Ubuntu Ifowuni kunye no-Ubuntu Touch iyafumaneka ngoku. Uhlaziyo oluzisa izinto ezininzi ezintsha ukongeza ekulungiseni ii-bugs zenkqubo ...
I-OTA-14 entsha iya kufika kwakhona emva kwexesha, kodwa iya kuza ...
I-OTA-14 entsha iya kubuya mva kwakhona. Kule meko, iya kufika ekuqaleni kukaDisemba. Uhlaziyo oluzisa ii icon kwi desktop ...
Ubuntu Bamba i-OTA-14 iya kulahla ngokuqaphelekayo
Ubuntu Bamba i-OTA-14 iya kulibaziseka, kodwa kuya kubakho iindaba ezinomdla ezifana nesikhethi sesicelo esinomtsalane ngakumbi.
I-OTA-14 iza kufika inemultitasking entsha enemvelaphi kunye neempawu zesicelo
Kungekudala inguqulelo elandelayo ye-Ubuntu Ifowuni iza kufika, i-OTA-14 eya kuthi njengeyona nto iphambili yayo isebenze kwimultitasking entsha eneempawu zeapp.
Uyifaka njani enye iVenkile evulekileyo kwifowuni Ubuntu
Ngaba uyafuna ukufaka usetyenziso olunomdla kwifowuni Ubuntu? Kule tutorial siza kukubonisa indlela yokufaka enye iVenkile evulekileyo kwifowuni ye-Ubuntu.
Ezinye zeendaba eziza kubumbano 8 kwividiyo
Kule vidiyo ungabona ezinye zeendaba eziza kubumbano lobume bemeko-bume ye-8 kunye nobumbano lwe-Ubuntu oluqale ngo-Epreli.
Isixhobo soMlingo-sisixhobo, sisixhobo esinomdla sokufaka Ubuntu kuThinta nakwesiphi na iselfowuni
Isixhobo seMagic-Isixhobo sisixhobo esivumela ufakelo olulula lweFowuni Ubuntu nakwesiphi na iselfowuni, nangona ineengxaki kunye nezibonelelo ...
I-Instagraph yongeza iifilitha kunye nezixhobo zokuhlela imifanekiso
I-Instagraph, esona sicelo sesithathu sokufikelela kwi-Instagram kwi-Ubuntu Ifowuni, ihlaziyiwe yenguqulo ye-0.0.3 ngophuculo olubalulekileyo.
Ifowuni entsha ye-Ubuntu OTA-13 iyafumaneka ngoku
I-OTA-13 entsha ngoku iyafumaneka, uhlaziyo lwezixhobo zeFowuni Ubuntu ezongeza ukuphucuka okukhulu kwinkqubo yokusebenza yeselfowuni
Ubuntu SDK ihlaziywa ngohlobo lwamva nje loMdali weQT
Ubuntu SDK ihlaziyiwe ngezinto ezininzi ezintsha, kubandakanya isikhongozeli se-LXD kunye nohlobo olutsha lwe-QT Creator, i-IDE esetyenziselwa ukwenza ii -apps ...
Ubuntu Touch OTA-13 izakufika ngo-Septemba 14
Inguqulelo elandelayo ye-Ubuntu Touch, i-OTA-13 iza kufika nge-14 kaSeptemba kwaye iya kubandakanya iindaba ezinomdla. Siza kukuxelela.
I-ZTE ayithathi glavu: "abasebenzisi bafuna i-Android okanye i-iOS kuphela"
Kubonakala ngathi i-ZTE ayizukuyenza ifowuni nge-Ubuntu Ifowuni ebicelwe ngumsebenzisi kwaye isizathu kukuba abasebenzisi bakhetha amanye amaqonga.
Imiceli mngeni ku-Ubuntu umngeni kwi-ZTE yokuqalisa iifowuni ngefowuni Ubuntu
Ngaba ungathanda ukuba iZTE isungule ifowuni ngefowuni Ubuntu? Ewe, oku kunokuba yinyani ukuba isigebenga saseKorea sithathe iglavu ephoswe ngumlandeli.
Ubuntu bokuchukumisa i-terminal iya kuba sisicelo esidityanisiweyo
I-Terminal iya kuba yinkqubo elandelayo ye-Ubuntu Touch yokutshintsha kwaye ibe yinkqubo eguqukayo, into eya kuba nomdla kubo bonke abasebenzisi ...
Ubuntu yenza kube lula ukuhambisa ii -apps zakho ze-iOS kunye nee-Android ku-Ubuntu Touch
Ubuntu iyaqhubeka nokusebenza ekuphatheni kweapps ze-iOS kunye ne-Android. Okona kwaziwayo kukulungelelanisa izikhokelo zophuhliso ezinje ngeReact Native Web ...
Ngaba unokufumana iselfowuni ngefowuni Ubuntu ngoku?
Abasebenzisi abaliqela bakhalaza ukuba kunzima ukufumana iselfowuni ngeFowuni Ubuntu. Imeko yokwenyani kodwa iya kuba yeyomzuzwana okanye kulindeleke ...
I-OTA-13 entsha ilibazisekile de kwaba nge-7 kaSeptemba
I-OTA-13 entsha iyakulibaziseka kude kube ngu-Septemba 7, nangona kule meko ukulinda kuya kufaneleka okanye ithi inkokheli ye-Ubuntu Touch ...
I-Canonical sele ixoxa malunga neendaba ze-Ubuntu Touch OTA-13
Kwiintsuku ezimbalwa emva kokuphehlelelwa kwe-Ubuntu Touch ye-OTA-12, iCanonical sele ichaze iinjongo zayo zohlaziyo lwe-OTA-13 lwale nkqubo.
Ubuntu Chukumisa i-OTA-12 kunye nokuqinisekiswa kwe-biometric ye-Miezu PRO 5
Uhlaziyo lwamva nje lwe-Ubuntu Touch OTA-12 lukhutshiwe, kunye nohlaziyo oluncinci kunye nenkxaso yokufunda iminwe kunye nokuqinisekiswa kwe-biometric.
Ii -apps ezi-5 esele sizifumene kwi-Ubuntu Ifowuni kwaye eya kusenza singaphoswa yi-Android
Uluhlu lweeapps ezi-5 ezaziwa kakhulu ze-Android esinokuba nazo kwi-Ubuntu Ifowuni ngaphandle kokuphulukana nokusebenza okanye ukuhlawula ...
IFairphone 2 sele iguqukile kwaye inevidiyo ebonisa oko
I-smartphone 2 i-smartphone sele inetekhnoloji ye-Aethercast kuhlobo lwayo lwefowuni Ubuntu, into enokubakho kuphuhliso lwe-UBPorts ...
Ukusasazeka kwe-OTA-12 entsha kuphucula ithebhulethi ye-BQ Aquaris M10
I-OTA-12 entsha ibandakanya ukulungiswa okumbalwa kodwa iya kwenza iBQ Aquaris M10 itekhnoloji yeAethercast ...
Meizu MX6 thaca ngokusemthethweni. Inguqulelo ka "Ubuntu Edition" esendleleni
Emva kweenyanga kunye neenyanga zokuvuza, iMeizu MX6 ityhilwe kwinkomfa yoonondaba e-China. Inguqulelo ka "Ubuntu Edition" iyeza kungekudala.
I-OTA-12 ifika ngomhla wama-20; I-OTA 13 isaphuhlisweni
NgoLwesithathu u-20 Ubuntu Touch we-OTA-12 uzokwaziswa. I-OTA-13 sele ikwisigaba sophuhliso kwaye iza kufika neendaba ezinomdla.
U-uWriter, iprosesa yamagama kwifowuni yethu yoBuntu
I-uWriter yinkqubo entsha enika ithuba lokuba neprosesa yamagama kungekuphela kwiselfowuni yakho kodwa nakwithebhulethi nakwikhompyuter yedesktop ...
Iifowuni ezine-Ubuntu Touch zifumana inkxaso yefowuni yeBluetooth
Ngeprojekthi ye-Ubports, inkxaso yeenkqubo ezingenazandla zeefowuni ezine-Ubuntu Touch ziphuculwe, kunye nezinye izinto.
I-Nexus 6 sele inefowuni yayo ye-Ubuntu rom
I-Nexus 6 sele inenguqulo engekho semthethweni ye-Ubuntu Phone, nangona ingasebenzi kakuhle njengabanini bayo kunye nabalandeli beFowuni ye-Ubuntu abangathanda ...
Ukucaciswa kwe Meizu MX6 Ubuntu Edition entsha kutyhiliwe
Iimpawu zobuchwephesha zeFowuni yoBuntu elandelayo evela kwinkampani yeMeizu zityhiliwe, iMeizu MX6 Ubuntu Edition, eya kumaxabiso nge-399 euro.
Ubudlelwane bukaMeizu kunye neCanonical abukapheli
Amarhe avela kwi-Meizu kunye ne-Canonical point ekuphuhlisweni kwesiphelo esitsha ziinkampani zombini ezinokusekwa kwi-Meizu Pro 6.
I-BQ inokumilisela isiphelo sendlela esitsha esibizwa ngokuba yiMidori ngeFowuni Ubuntu
Iibhugi ezininzi kunye nabasebenzisi bayalumkisa malunga ne-smartphone entsha, i-smartphone ene-Ubuntu Ifowuni kunye nesiteketiso sikaMidori, kodwa ngubani oya kuba nguMidori?
I-OnePlus 3 iya kuba nesabelo sayo kwi-Ubuntu Phone
I-OnePlus 3 entsha iya kuba nohlobo olungekho sesikweni lweFowuni yobuntu, ubuncinci yile nto iboniswe liqela lewebhusayithi le-UBports, iwebhusayithi engamiselwanga ye ....
Ukusukela ngoku ukuya phambili kuya kuba nzima ukuncokola ku-Facebook kwi-Ubuntu Ifowuni
Ngaba usebenzisa ingxoxo ye-Facebook kwiFowuni yoBuntu? Ewe, iindaba ezimbi: ukusukela ngoku kuya kuba nzima ngakumbi ukunxibelelana nabafowunelwa bakho.
Ukuqinisekiswa kweBiometric kunokufika ku-Ubuntu Touch kwixa elizayo
Omnye wabaphuhlisi beCanonical uthetha malunga nophuhliso lwe-Ubuntu Touch, enokuthi ibandakanye inqaku elitsha lokufunda ngeminwe.
I-Aethercast iya kufikelela kwii-mobiles ezingekho semthethweni ngeFowuni yoBuntu
I-Aethercast yitekhnoloji eye yaguqula ubuntu beFowuni kunye nezixhobo zayo ezisemthethweni, kodwa ngoku kubonakala ngathi iza kufikelela kwiziphelo ezingasasebenziyo ...
Uyifaka njani inguqulelo yakudala ye-Ubuntu Ifowuni kwiselfowuni yakho
Isifundo esincinci sokubuyela kwinguqulelo yakudala ukuba imeko yohlaziyo lwefowuni Ubuntu isebenza ngakumbi kwisiphelo sethu ...
Ubuntu Isikhangeli sokuchukumisa siza kuphucula kakhulu kwi-OTA-11
I-Ubuntu Touch OTA-11 kufuneka ifike kamva kule veki kwaye iindaba eziza kubandakanya ziya kuba zihlaziyeke kakhulu kwisikhangeli sewebhu.
Indlela yokubeka izikhokelo "zomntu" ngeSpanish ku-Ubuntu
Wakhe wazibuza ukuba ungazibeka "izikhokelo" zomntu ngeSpanish? Ukuba kuyenzeka. Sichaza yonke into kuwe kweli nqaku.
IiNkqubo ezimbini zeemvumi kwifowuni Ubuntu
Namhlanje usetyenziso lweselfowuni lufumana amandla amangalisayo. Sonke sineemfuno ezithile kwaye inyani ...
Ubungakanani befoto ngoku buvumela abasebenzisi beFowuni Ubuntu ukuba bajonge iifoto zabo zeDropbox
I-Canonical ihlaziye ubungakanani beFoto ukuze abasebenzisi beFowuni Ubuntu babone iifoto abazilayishe kwiDropbox kwezinye iimeko.
Ubuntu Touch OTA-11 iyakulibaziseka iveki; kungekudala izakusebenza kwi-OTA-12
Iindaba ezimbi kubasebenzisi be-Ubuntu Touch: I-OTA-11 iya kulibazisa ukukhutshwa kwayo ngeveki kwaye ayisayi kuphinda ifike ekupheleni kukaMeyi.
Ifowuni entsha ye-Ubuntu OTA-11 iya kufika ngeAethercast
Ifowuni entsha ye-Ubuntu OTA-11 iya kuba ilungile kungekudala, uhlaziyo oluya kubandakanya imisebenzi emitsha enje ngeAethercast ...
I-Canonical iya kwenza utshintsho kummandla we-Ubuntu Ifowuni
Ubuntu buqinisekisile ubukho besikhangeli kubasebenzisi bokulawula ngcono eziapps kwifowuni Ubuntu ...
IMeizu PRO 5, eyona Fowuni yoBuntu inamandla, ngoku iyafumaneka kwintengiso
Isiphelo sendlela ye-Meizu Pro 5 iyafumaneka ngoku, eyona Fowuni inamandla kwi-Ubuntu kwintengiso, inempawu ezinomtsalane kunye nexabiso le- $ 370.
Ezi zezona zinto zibalulekileyo zibaluleke kakhulu kwi-BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition
Isikhokelo esincinci kwezona 10 zezona zinto zibalulekileyo zokuzisebenzisa kunye ne-BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition, izixhobo eziza kuvumela ukuhlangana okungcono ...
Ukusetyenziswa kwePlasma kwiFowuni Ubuntu njengesiseko senkqubo
Abaphuhlisi bePlasma Mobile babhengeze ukuba baya kuqala ukusebenzisa Ubuntu Ifowuni njengesiseko senkqubo yabo yokusebenza, kunye neCyanogenMod ...
I-Meizu Pro 5 Ubuntu Edition ngoku iyafumaneka ukuze ithengwe. Iselfowuni yeMeizu iya kuthengiswa nge $ 369, ixabiso elinomdla kwinto eliyibonayo.
Ubuntu upapashe isikhokelo esikhuphelayo ngeendlela ezinokusetyenziswa kunye ne-Bq Aquaris M10 Ubuntu Edition, ithebhulethi yokuqala eguqulweyo evela kwi-BQ ...
ICanonical ayinazicwangciso zokuzisa ukuhlangana kwi Meizu MX4
Iindaba ezimbi kubanini beMeizu MX4, njengoko iCanonical ingenazicwangciso zokuzisa ukuhlangana kwezixhobo zazo.
I-OTA-10.1 Hotfix ikhutshwa ngokusemthethweni
Emva kokukhutshwa kwe-Ubuntu Touch OTA 10, eyona nto inengqiqo yayikukucinga ukuba ukukhutshwa okulandelayo kuya kuba ...
Amalungiselelo aqala ukumilisela Ubuntu bokubamba i-OTA-11
Emva kokukhutshwa ngokusesikweni kwe-OTA-10, abaphuhlisi be-Ubuntu Touch sele behlile kwishishini elilungiselela i-OTA-11.
Ubuntu Isiphequluli sokuchukumisa sivumela ikopi kwaye uncamathisele kwi-OTA-10
Ubuntu Buza i-OTA-10 iza kuza nezinto ezintsha, njengokukopa kunye nokuncamathisela, kunye nokulungiswa kwe-bug. Kancinci kancinci, le nkqubo iyaphucuka.
Ngaba iMeizu ilungiselela iselfowuni entsha enefowuni Ubuntu?
UMeizu uza kuphehlelela izixhobo ezine ezizayo kwinyanga ezayo. Kwezi ndawo zokugqibela, zintathu kuphela iiterminal ezaziwayo, kwaye ezine inokuba luhlobo loBuntu ...
I-BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition inokugcinwa ngo-Matshi 28 olandelayo
I-BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition inokugcinwa ngo-Matshi 28 olandelayo kwivenkile ye-BQ nangona singazukuyifumana kude kube malunga no-Epreli ...
I-FreeOffice ngoku inokuqhutywa kwifowuni ye-Ubuntu
I-LibreOffice sisicelo esele sisetyenziswe kwi-Ubuntu Ifowuni njengoko abanye abasebenzisi bebonisile, ukusebenza ngokuchanekileyo.
I-BQ iveza i-Aquaris M10 Ubuntu Edition, icwecwe lokuqala lokuguqula izinto
I-BQ yazise ithebhulethi yokuqala ye-Canonical, i-BQ Aquaris M10 ngexabiso elikhuphisana ngokwenene. Ulindele ntoni ukuyithenga?
Ezi ziishukumisi ezinefowuni Ubuntu kwindawo yentengiso
Inqaku elincinci malunga neefowuni zeBuntu ezihamba kwimarike, ii-mobiles ezine zonke izinto ezithandwayo kunye neepokotho.
UDekko, umxhasi weposi yomnxeba weposi Ubuntu ujongeka ulungile
Yintoni eya kuba ngumthengi weposi wendalo kwi-Ubuntu Ifowuni ijongeka intle kakhulu. Ibizwa ngokuba yi-Dekko kwaye ayinanto yakubamonela abo be-iOS kunye ne-Android.
I-Aethercast, itekhnoloji eya kuthi idibanise umabonakude ngefowuni yoBuntu
I-Aethercast yitekhnoloji entsha yefowuni Ubuntu eya kusivumela ukuba sisebenzise iTV njengesikrini sefowuni yethu ngaphandle kweentambo okanye izixhobo.
Abaphuhlisi bafuna ukuzisa irediyo ye-FM kwiifowuni ze-BQ
Ubuntu abaphuhlisi bokusebenza basebenzela ukwenza iifowuni zeBQ Ubuntu zihambelane nonomathotholo we-FM.
Ngoku ungasebenzisa ii-Ubuntu zoChukumiso kwi-Ubuntu Desktop
Ukusukela ngoku ukuya phambili singasebenzisa ii-Ubuntu zokuChukumisa iiNkqubo zokuSebenzisa ukwenza ii-Ubuntu zoChukumiso lusebenze kwi-Ubuntu Desktop ngaphandle kokuphazamisa iqonga
Ukuhamba kwe-GPS, usetyenziso lwe-Ubuntu Touch kunye nemoto yethu
Ukuhamba ngeGPS yinkqubo elingana neeMephu zikaGoogle kodwa usebenzisa isoftware yasimahla enjengeOpenStreetMap okanye iOSCRM, phakathi kwezinye iilayibrari zeUbuntu Touch.
Ubuntu One ngokuthe ngcembe iya kuba liziko lolawulo Ubuntu, ke esi sifundo sincinci se-newbies abafuna ukwenza iakhawunti.
UbuTab, lelinye lawona macwecwe anamandla ane-Ubuntu Touch
UbuTab yenye yeepilisi zokuqala ezine-Ubuntu Touch, enesikrini esili-10 kwaye ixabiso laso liphantsi ngento eliyibonayo, kubandakanya nenkqubo emibini.
Faka Ubuntu Touch kwi-Nexus yakho ngendlela ezimbini
Isifundo esincinci sendlela yokufaka Ubuntu kwiindlela ezimbini kwiGoogle smartphone, iNexus, rhoqo ngaphandle kokususa i-Android, njengenyathelo lokhuseleko.
Ubuntu Bamba imifanekiso ye-Bq Aquaris E4.5 ene-Android ngoku ekhoyo
Iifayile ngoku ziyafumaneka ukufaka Ubuntu kwi-Bq Aquaris E4.5 ii-smartphones ezine-Android, kulula ukuyifaka nesikhokelo sethu.
Indlela yokufaka Ubuntu kwi-Android terminal
Siza kukunika isikhokelo sokuba ufunde indlela yokufaka Ubuntu kwiifowuni eziphathwayo kwisiphelo sendlela yakho se-Android usebenzisa inkqubo yonjiniyela.
I-Ubuntu Touch emulator ngoku iyafumaneka
Isifundo esincinci sokufaka kunye nokuqwalasela i-emulator yokuBamba Ubuntu ku-Ubuntu ukuphuhlisa usetyenziso ngaphandle kwe-smartphone ngeli qonga.